ကလေးကို စကားပြောသင်ရအောင် – Burmese Baby
Web Master | February 4, 2018 | Articles, Lifestyle | Comments
ကလေးတစ်ယောက် စကားပြောတတ်ဖို့ ဖြတ်သန်းရာခရီးလမ်းသည် ရှည်လျားသည်။ ကလေးတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး စကားစပြောချိန်များမှာလည်း အလွန်ကွာခြားပါသည်။ စကားပြော အနည်းငယ် နောက်ကျလျှင် စိတ်ပူမလွန်ပါနှင့်။ အချို့ကလေးများက စကားပြောနောက်ကျသော်လည်း စပြောသည်နှင့် ရုတ်တရက် အများကြီးပြောနိုင်သူများရှိပါသည်။
ကလေး အသံလေးများနှင့် ကလေးစကားတတ်လာပုံ အဆင့်ဆင့်ကို လေ့လာကြပါစို့။
မွေးစ- ၃ လ
မေမေနှင့် ဖေဖေ့ကို ပြုံးပြသည်။
ဗလုံးဗထွေး စရွတ်တတ်ပြီ။ အထူးသဖြင့် ပ သံ, ဘ သံ နှင့် မ သံ လေးများပြုတတ်သည်။ ခိုးခိုးခစ်ခစ်ပို ရယ်တတ်ပြီ။ စိတ်လှုပ်ရှားလျှင် မကျေနပ်လျှင် အသံပေးသည်။ တစ်ယောက်ထဲ ဆော့လျှင် တဝူးဝူး တကူကူးနှင့် အသံထွက်တတ်သည်။
၇ လ – ၁ နှစ်
ခိုးခိုးခစ်ခစ်သံများ ရှည်လာမည်။ ဥပမာ- တာ့တာ, ဘာဘား, အားအား, ပီပီပီပီ စသော အသံတို့ပါထွက်လာမည်။
သူ့တို့ကို အာရုံစိုက်အောင် အသံပြုတတ်ပြီ။ အသက် ၉ လမှ ၁နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မေမေ ဖေဖေ တစ်လုံးနှစ်လုံးစပြောကောင်းပြောပြီ။ အချို့လည်း ၃ လုံးထိ ပြောသည်။
သတိကြီးကြီးပြုရန်- ပထမတစ်နှစ်တွင် ကလေးက စကားမပြောသော်လည်း မေမေနဲ့ဖေဖေ ပြောသမျှ နားထောင်နေပါသည်။ ဒုတိယနှစ်တွင် ပြောတတ်ဖို့ရာ စကားလုံးများကို မှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးကို အချိန်မီ စကားပြောစေလိုလျှင် ပထမတစ်နှစ်တွင် ကလေးထိန်းရင်း ရိုးရှင်း၍ အသုံးဝင်သော နေ့စဉ်သုံး စကားလေးများကို ဖြေးဖြေးနှင့် ပုံမှန်ပြောပေးပါ။
ဥပမာ- မေမေ ရေချိုးပေးမယ်နော်, သားမျက်နှာလေး သန့်အောင် သုတ်ပေးမယ်, ရေက နွေးတယ်, နုိ့စို့တော့နော်, အော် သားလေး ဗိုက်ဝပြီလား စသည်ဖြင့် အမြဲပြောပါ။
၁ နှစ်မှ ၂ နှစ်
နှစ်လုံးတွဲ စကားလုံးများတိုး၍ ပြောမည်။ ဥပမာ- ရုပ်ရုပ်, မန်းမန်း, တာ့တာ
လတိုင်းလတိုင်း စကားလုံး အသစ်များတိုး၍ ပြောလိမ့်မည်။
ဥပမာ- ကား, ယူ, စား, ရ
အသက် ၂ နှစ်နီးလာလျှင် နှစ်လုံးပူး မဟုတ်သော စကားလုံးများ ပူးတွဲပြောနိုင်လာမည်။
ဥပမာ- မေမေ မောပီ, ဖေဖေ မုန့်မုန့်ဝယ်
သတိပြုရန်- မသင်ရင် မပြောတာ မဆန်းပါ။ မြင်မြင်သမျှကို ဘယ်လို ခေါ်သည်သင်ပေးပါ။ ဟ(ဥပမာ-ဟုတ်, ဟိုဘက်), ဝ(ဝုတ်ဝုတ်, အာဝါး), သ (သိ, သွား, သူ), န (နဲ, နိုင်, နိုး), ဒ (ဒီမှာ, ဒီလို)-ဟ, ဝ, သ, န, ဒ သံပါသော စကားလုံးများသင်ပေးလို့ရပါသည်။ လမ်းလျှောက်ထွက်လျှင် ကား, သစ်ပင်, မြက်ခင်း, တို့ကို ပြပြီး နာမည်ပြောပြပါ။ အကြိမ်ကြိမ်ပြောလျှင် ကလေးက ကားမြင်လျှင် ကားဟု ပြောလာမည်။ နောက်တစ်ဆင့် တိုးသင်ပါ။ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါ ကား, ကားရဲ့ အရောင်က အနီရောင်ပေါ့ သားရယ် စသည်ဖြင့် သင်ပါ။ ကလေးက ခွေးမြင်၍ ခွေးဟု ရွတ်လျှင် ဟုတ်တယ် ခွေးက အကြီးကြီး (သို့) ခွေးက သေးသေးလေး စသည်ဖြင့် တိုးသင်ပါ။
၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်
စကားလုံး ၃ လုံးတွဲများစပြောပြီ။ ပစ္စည်းနှင့် ကစားစရာတောင်းတတ်ပြီ။ ဖ သံ, ဂ သံ, န သံ, ဒ သံများ ပို၍ ပီသလာနိုင်ပြီ။ အချို့က ဘာကြောင့်လဲ လို့ မေးတတ်ပြီ။
သတိပြုရန်- စကားကို ဆက်သင်ပါ။ အရောင်, နံပါတ်, မိသားစုဝင် အမည်လေးများ, နေ့စဉ် အစားအသောက်များ သင်ကြားပါ။ ကဗျာတိုတိုနှင့် ကလေး သီချင်းလေးများ စသင်ပါ။ စာလုံးအပြင် စာကြောင်းများ ပိုသင်ပါ။ ပြောအောင်လည်း မေးခွန်းများများမေးပါ။ မေးပြီးရင်လည်း ဖြေတာကို နားထောင်ပေးပါ။ မရှင်းရင် ထပ်မေးပါ။ လျစ်လျူမရှုပါနှင့်။
ဥပမာ- သားရေသောက်မလားထက် သားရေ ရေနဲ့နို့ ဘယ်ဟာသောက်ချင်လဲ?
၃ နှစ်မှ ၄ နှစ်
စကားလုံး ၄-၅ လုံးပါဝင်သော စာကြောင်းတိုလေးများ အတော်ပြောတတ်ပြီ
မူကြို ပို့လျှင် တနေ့တာ လုပ်ဆောင်မှုများကို မေးလျှင် ပြောပြလိမ့်မည်
ဘယ်သူလဲ, ဘာလဲ, ဘယ်မှာလဲ စသည်တို့ ဖြေနိုင်ပြီ
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ, ဘာကြောင့်လဲတို့ မေးနိုင်ပြီ
သတိပြုရန်- စကားကို ဆက်သင်ပါ။ ပုံပြင်လေးများ နေ့စဉ် ပြောပြပါ။ကလေးကို ပြန်ပြောပြခိုင်းပါ။ ဉာဏ်စမ်း ရိုးရိုးလေးများမေးပါ။
မိသားစု ဓာတ်ပုံများပြပြီး မိသားစု ရာဇဝင်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါ။
ဥပမာ- သားရေ ဒါက မေ့မေ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေ, သားရဲ့ ဖိုးဖိုး ဖွားဖွား, မေမေ့မှာ ညီမတစ်ယောက် အစ်ကို တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါဆို သားက ဦးဦးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်ရှိတယ်။
၃ နှစ်ကျော်ထိ အချို့အသံများကို မှန်အောင်မထွက်နိုင်သူ ကလေးများလည်း ရှိပါသည်။ ပုံမှန်ပါ။ မပီလျှင် ချစ်စရာကောင်းသော်လည်း မပီတဲ့ အခါတိုင်းပြင်ပေးပါ။
၄ နှစ်မှ ၅ နှစ်
ကကြီး, ခကွေး, ABCD စာလုံးလေးများ ဖတ်တတ်ပြီ, ၁,၂,၃,၄ ဂဏန်းလေးများ ရေတွက်တတ်မည်။ စာကြောင်း ၂ ဆင့် သို့ ၂ ကြောင်းကို ပေါင်း ပြောတတ်ပြီ။
ဥပမာ- သားမှာ ကားရုပ်လေး အများကြီးရှိပေမယ့် ညီမလေးမှာ ၂ စီးပဲရှိတယ်။
သတိပြုရန်- စကားကို ဆက်သင်ပါ။ အဖြူ အမည်း, အမြင့် အနိမ့်, အကြီးအသေးစတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အခေါ်အဝေါ်များ သင်ပေးပါ။ အသီးများ, အသားများရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို အုပ်စုလိုက် သင်ပေးပါ။ စားပွဲ, ထိုင်ခုံ, မီးလုံးစသော အိမ်ရှိ ပစ္စည်းများကို မြင်ရသလောက် ပြောပြပါ။ တစ်ခုခု ခိုင်းရင် နှစ်ဆင့်ခိုင်းပါ။ ဥပမာ- သားရေ ကြမ်းပြင်က အရုပ်တွေကို ပုံးထဲကောက်ထည့်ပြီးရင် ပုံးကို သူ့နေရာနဲ့ သူပြန်ထားပါ။
ကလေးစကားပြောရင် နားထောင်ပါ, အသိအမှတ်ပြုပါ, ချီးကျူးပါ, အားပေးပါ။
စကားပြော ချောမွေ့သော, စကားလုံးကြွယ်ဝသော, ယဉ်ကျေးစွာ ပြောတတ်သော, အခြားသူ နားလည်အောင် ပြောနိုင်သော မြန်မာကလေးများ ဖြစ်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ရေးပါသည်။
#နေနေမိုးဆွေ ( Child Health Myanmar Page)
-Share ကိုနှိပ်၍ လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါသည်။
Reference: American Speech-Language-Hearing Association, Speech Pathology Australia.
Comments | Dec 29, 2017
(၁) နှစ်ကနေ (၃)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်အတွက် လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလရဲ့ နောက်ဆုံးလတွေမှာ ညောင်းညာကိုက်ခဲလာတဲ့အခါ
Comments | Nov 16, 2017
ကွန်ဆန့် ဆိုတာ ဘာလဲ။